September 10, 2019 - ThutaSone
အေအေအဖွဲ့ဝင်ဟုယူဆရသူ (၄) ဦးကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနဲ့ အတူမန္တလေးမြို့တွင် ဖမ်းမိ
September 10, 2019 ThutaSone 0
မန္တလေးမြို့တွင် အေအေအဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနဲ့ အတူ ဖမ်းမိ စက်တင်ဘာ ၁၀ – နိုင်လင်းဦး မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြို့သစ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်တစ်ခုတွင် အမျိုးသား (၄) ဦးနှင့်အတူ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က […]
ကိုကိုနှင့် ညီညီတို့၏ ဖခင်နှင့်မိခင်ထံသို့ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ….
ကိုကိုနှင့် ညီညီတို့၏ ဖခင်နှင့်မိခင်ထံသို့ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…. ကိုကိုနှင့်ညီညီတို့၏မိခင်နှင့်ဖခင် ဖခင်ကမျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲမိခင်ကသာသောကနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့တော့ မိခင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုကြီးမားတဲ့မိခင်မေတ္တာကိုတွေ့ရလို့ စိတ်ထဲမကောင်းပါဘူး။ဒီနေရာမှာကျတော့်အမေအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျတော့်အမေငယ်ငယ်ထဲက သားသမီးတွေကိုအကြီးအကျယ်တားမြစ်ထားတာ၂ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက‘ဆဲတာ’။ဆဲရင်၃ ခုလုပ်ပါတယ်။ပထမကပါးစပ်ကိုအပ်နဲ့ပေါက်တယ်။ဒုတိယကပါးစပ်ဆွဲဟပြီး မီးခြစ်ခြစမီးခြစ်တံပစ်ထည့်တယ်။တတိယကခေါင်းကို စည်ပိုင်းထဲနှစ်ပြီးအပြစ်ပေးတယ်။ နောက်အကြီးအကျယ်တားမြစ်တာတစ်ခုကကိုယ့်ကြောင့်သူတပါးဘဝထိပျက်အောင်လုပ်တာပဲ။အဲ့လိုလုပ်ရင်‘ငါကိုယ်တိုင် ဖမ်းပြီးရဲလက်အပ်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါကိုယ်တိုင်သတ်မယ်’လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့တဲ့ အမေပါ။တကယ်တမ်းကိုယ်ကအများအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူကပိုပြီးခါးစီးခံခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာကျတော့်အကြောင်းဘာလို့ပြောရသလဲဆိုရင်“လူတစ်ယောက်ရဲ့အသိစိတ်ကိုနောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအဖြစ်အပျက်ကပြောင်းလဲပစ်နိုင်လို့ပါ”။ ခုအမရဲ့သား၂ယောက်ကျူးလွန်တယ်လို့ကာယကံရှင်ကလေးလေးပြောလာတော့လူတွေကအမ သား၂ ယောက်ကိုသံသယစိတ်တွေပိုများလာတာပေါ့။အမခုလည်းရင်ဆိုင်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေဟာအမှန်တရားဖြစ်မလဲဆိုတာအမသိမှာပါ။‘အောင်ကြီး’ ကျူးလွန်လို့‘အောင်ကြီး’ ကိုအပြစ်ပေးတာဟာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်‘အောင်ကြီး’ […]
မီတာယူနစ်ပေါင််း သန်းချီလျော့ကျသွားသော််လဲ ငွေကျပ်၃၆ဘီလီယံကျော်် အမြတ််ရရှိိ
မီတာယူနစ်ပေါင််း သန်းချီလျော့ကျသွားသော််လဲ ငွေကျပ်၃၆ဘီလီယံကျော်် အမြတ််ရရှိိ မီတာခများ တိုးမြှင့်ပြီးနောက် ်ရန်ကုန်တွင် မီးသုံးစွဲမှု ယူနစ်ပေါင်း သန်းချီလျော့ကျသွား၊ သုံးစွဲမှု လျှော့ဲသွားသော်လည်း သုံးစွဲခတင်လိုက်သဖြင့် ငွေကျပ်၃၆ဘီလီယံကျော် ပိုရခဲဲ့ ရန်ကုန်် ၊စက်တင်ဘာ ၉ရက်၊ မီတာခ တက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်တွင်် မီးသုံးစွဲမှု ယူနစ်သန်းချီလျှော့သွားသည်။ မီတာခတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု မပြုလုပ်ခင် […]
မျော််​လင်​့မထား​သောအခက််အခဲဲ ကြုံနေရလျှင်် ဖြေရှင််းနိုင်မည့် နည််းလမ်း
မျော််​လင်​့မထား​သောအခက််အခဲဲ ကြုံနေရလျှင်် ဖြေရှင််းနိုင်မည့် နည််းလမ်း လိိုအပ်သူများအတွက် မျှဝေခြင်းပါ မိိမိအိမ်​ဘုရားတွင်​ မိမိ​မွေး​နေ့တွင်​ လှူပါ အနီးဆုံး အခက်​ခဲကိုကျော်​ကာ လိုရာပြည်​့နိင်​၏ သင်​့​တော်​ရာ ဖန်​ခွက်​​ပေါ် ပန်​်းကန်​ ပန်​းကန်​​ပေါ် ကိတ်​မုန်​ ့့ တင်​လှူပါ ​ နေ့ခင်​​း (သို့မဟုတ်​) ည​နေ / ည […]
ဗစ်တိုးရီးယားကိုမနက်ဖြန် ရုံးချိန်းတွင် မေးမြန်းမှု အဆင်ပြေစေရန် တရားရုံးတွင် စမ်းသပ်
ဗစ်တိုးရီးယားကိုမနက်ဖြန် ရုံးချိန်းတွင် မေးမြန်းမှု အဆင်ပြေစေရန် တရားရုံးတွင် စမ်းသပ် လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် ရင်းနှီးမှုရှိစေရန်ဗစ်တိုးရီးယားကို အုပ်ထိန်းသူများနှင့်အတူ ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံး၌ ယမန်နေ့က ပဏာမ မေးခွန်းအချို့ မေးမြန်းမှုအပါအဝင် တစ်နာရီကျော်ကြာ ထိတွေ့ဆောင် ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိ တရားသူကြီး ဒေါ်ဖြူဝင်း လတ်က ပြောသည်။ ရုံးချိန်းမတိုင်မီတရားရုံးနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် စက်တင်ဘာ […]
မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်များ သတိထားသင့် (ဦးထွန်းလွင်)
မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်များ သတိထားသင့် (ဦးထွန်းလွင်) အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ ဆုတ်ခွာနိုင်ပြီး ဆုတ်ခွာရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများ တစ်ကျော့ပြန် ကျရောက်လာနိုင်၍ သတိပြုနေနိုင်ရန် မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်နှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတိပေးသည်။ မိုးတိမ်တောင်အန္တရာယ် ဖြစ်သည့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ […]
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် ဝက်အူလှည့်ဖြင့် အထိုးခံရ (ရုပ်သံ) ….
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် ဝက်အူလှည့်ဖြင့် အထိုးခံရ (ရုပ်သံ) …. ည ၁ဝနာရီကျော်က မိတိဆွေတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလ်ု့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကို မှန်တွေ အကုန်ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ […]
အခုဆိုမိုးတွင်းရောက်လို့ကလေးငယ်ဖျားလို့ ဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်မယ်ဆိုရင် သိထားသင်​့​သော ​ကောင်​းကျိုးနှင်​့ ဆိုးကျိုးများ
ကလေးငယ်ဖျားလို့ ဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်မယ်ဆိုရင် သိထားသင်​့​သော ​ကောင်​းကျိုးနှင်​့ ဆိုးကျိုးများ အခုဆိုမိုးတွင်းရောက်လို့ကလေးငယ်တွေအဖျားအနာများလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကလေးတွေကို ဆေးခန်းပြသူပြ၊ အိမ်မှာပဲကုသူကုနဲ့ပါရာစီတမောကိုရွေးချယ်တိုက်ကြတဲ့သူတွေကအများဆုံးပါပဲ။ပါရာစီတမောကို ပါးစပ်ကနေအရည်အခဲနဲ့တိုက်ကြတဲ့အပြင်ကလေးရဲ့စအိုဝမှတဆင့် ဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ပြီးအဖျားသက်သာအောင်လည်းလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပါးစပ်မှတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့စအိုဝမှဂြိုလ်တုထည့်ခြင်းဘယ်အရာကပိုကောင်းသလဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ လူအများစုထင်ထားကြမှာကတော့စအိုမှပါရာစီတမောဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ခြင်းဟာ ပါးစပ်မှတိုက်ခြင်းထက်ပိုစွမ်းတယ်၊အဖျားမြန်မြန်ကျတယ်လို့မှတ်ယူနေကြပါတယ်။ဒါဟာအမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံဟယ်မတ်ဆေးပညာဌာနမှ ဒေါက်တာဂိုးစတိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကသုတေသနပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါပါးစပ်မှပါရာစီတမောတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့စအိုမှပါရာဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ခြင်းဟာအဖျားကျစေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရော၊အဖျားကျချိန်ရောမှာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါဆိုဂြိုလ်တုထည့်တာဟာပါးစပ်မှတိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလား? ဘာတွေပိုကောင်းလဲ။ ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိမလဲ? ပါရာဂြိုလ်တုတောင့်ကိုကလေးများဆေးတိုက်ရခက်ခဲတဲ့အခါမှာ ဆေးအချိန်အဆမမှန်ခြင်းဖြစ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရမ်းအန်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပါးစပ်ကနေဆေးတိုက်လို့မဝင်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ပါးစပ်ကတိုက်ခြင်းထက်ကလေးငယ်များခံရနည်းနည်းခက်ပါမယ်။ရုန်းကန်ငိုယိုနေနိုင်ပါတယ်။အဖျားကျဆင်းစေနိုင်ခြင်းအစွမ်းကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင်ပြေရာလမ်းကြောင်းကနေသာပါရာစီတမောကိုပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ […]
ခင်ပွန်းသည်ကဇနီးကို Surprise လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကာ မျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသား
ဇနီးကို Surprise လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကာ မျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသား ချစ်သူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို Surpriseလုပ်တယ်ဆိုတာဟာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပျော်ရွှင်စေတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အသက် ၃၄နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ surpriseလုပ်ပေးမယ်လို့ ဇနီးသည်ကိုပြောပြီး ဓားနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ The sun websiteရဲ့ဖော်ပြချက်အရ တရားခံဖြစ်သူအမျိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ဇနီးကို surpriseလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အိပ်ရာပေါ်မှာမျက်လုံးမှိတ်ကာ […]
ပိုိက်ဆံပြတ်နေလျှှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကိို ပိုက်ဆံအိ်တ်ထဲဆာင်ထားပါ
ပိုိက်ဆံပြတ်နေလျှှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကိို ပိုက်ဆံအိ်တ်ထဲဆာင်ထားပါ ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိိုင် နှင့်ပတ်သက်် သော စိိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသူများအတွက် ကုစားနိုင်သည့်နည်း ၃မျိုးရှိသည်။ ပိုိက်ဆံပြတ်နေလျှှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကိို ပိုက်ဆံအိ်တ်ထဲဆာင်ထားပါ။ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးတိုးပွားစေရန်အတွက််ဖြစ်စေ၊လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ နည်းများမှာ ၊ဆန်ကိုအသုံးပြုုု ခြင်းပါဝင်ပြီး ဆန်သည်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဆန်ကို မင်္ဂလာရှိိသည့် ကိစ္စများတွင်သုံးသည််။ ပြီးပြည့်စုံ […]